Ogaden News Agency (ONA) – Soomaaliya oo Sheegtay In Imaaraadka uu Wadahal Usocdo.
Soomaaliya oo Sheegtay In Imaaraadka uu Wadahal Usocdo.
Soomaaliya ayaa sheegtay inay wadahadal la wado dawlada Imaaraadka Carabta ku saabsan dhacdadii dhowaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagula wareegay lacag dhan 9 milyan iyo 600 oo kun oo ay dalkakeentay diyaarad u kiraysnayd imaaraadka Carabta.
War saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wadahadallo qoto dheer la yeeshay ay dawlada Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeeddada lacagtaasi iyo sida loo isticmaalayo iyo in dawladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaradka isticmaalka lacagtaasi.
Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo dhowaynayso maalgashiga iyo iskaashiga wadamada caalamka. Ma kala cada waxa ay arimahan murugsan ku dambayn doonaan balse waxaa muuqata in aad loo kala irdhoobay oo xidhiidhkii labada dal uu aad u xumaaday.